Kwenzeka ntoni kwi-Top40 Geospatial kwi-Twitter -Geofumadas
Kwenzeka ntoni kwi-Top40 Geospatial kwi-Twitter
NgoJanuwari, 2015 Geospatial - GIS, Internet kunye neBlogs
Kwiinyanga ezintandathu ezedlulileyo Siphonononge phantse iiakhawunti ezingamashumi amane ze-twitter, kuluhlu esilubiza ngokuba yi-Top40. Namhlanje sihlaziya olu luhlu ukuze sibone okwenzekileyo phakathi kukaMeyi 22 kunye nokuphela kukaDisemba 22, 2014. Kuzo zonke, ezili-11 zingesiNgesi, zimbini ngesiPhuthukezi kwaye ezinye ngeSpanish.
I-10 Geospatial phezulu
Ukusuka kwi-akhawunti engama-akhawunti angama-40, usebenzisa igrafu yokubonisa, unokubona ukuba umzila we-intersection ukhuphuke ukusuka kwi-14,000 ukuya kwi-16,000.
Oku kutshintsha kakhulu umdla kule 10 phezulu kubonisiwe kule grafu ingezantsi, apho 75% siquka ngamacala ezintandathu, eshiya i amathathu 25%, ekukhoyo kuzo @geofumadas kunye @directionsmag ukuba ekunene kwi wekhondo le curve bomtya.
Igrafu entsha ukuya kuDisemba ka-2014:
Oku kwakuyigrafu yangaphambilini, apho ungabona ukuba kuphela ii-akhawunti ze-8 zibhalwe apha; Ngoku ziyi-9.
3 yezi imvelaphi Saxon (zimakishwe ebomvu) ngexesha umthombo IsiPhuthukezi (iphawulwa ngombala oluhlaza), ngoko kukho ezintathu imvelaphi kokufika, njengoko kuchaziwe ngaphambili, Engineering Network kunye BlogIngeniería ngokwenene azikho ingxenye ngqo geospatial kodwa ukuba benchmark lwe akhawunti ukuba ukhule inokhuphiswano.
I-akhawunti kaMeyi 2014-Disemba 2014
5. @MundoGEO 11,958, 13,420 - XNUMX
I-2 yile ndlela ihamba ngayo, ihlukaniswe ngokulinganayo nayo yonke enye umgca:
8. @ izikhokelomag 6,919 - 8,061
Eminye iMsila yeeAkhawunti zeGeospatial
Ngokushiya igrafu eyahlula ii-akhawunti zokuqala ezisi-8, sinegrafu entsha apho amaqela amane anokuhlulwa, aqala ngokuchanekileyo kwiakhawunti ye-Esri_Spain. I-intersect yenyuka ngama-5,200 XNUMX.
Oku kulandelayo umzobo ongaphambili.
Ukuba igrafu efanayo nosasazwayo, sibona imbono ummeli ngakumbi oko kule ingqokelela akhawunti 27, 25% ngezigaba sibiza nganye Q1, Q2, Q3 and Q4:
Omnye ungumfanekiso ogqityiweyo
I-Q1: ii-akhawunti ze-3
Eli candelo ligcina iiakhawunti ezintathu ezifanayo. Oku kumela i-25% yabalandeli abaqokelelweyo, ekubeni ngu-Esri Spain kuphela kweakhawunti yesoftware endiyibandakanyayo, yokuba sisalathiso esinomdla kwicandelo le-geospatial.
Utshintsho kule candelo lukungena kwi-@geoinformatics emva kokusuka kwi @geofumadas ukuya phezulu10, apho @geoinformatics1 ingena kuloluhlu.
11. @URISA 4,299 - 5,055 XNUMX
12. @Geoinformatics1 3,656 - 4,491 XNUMX
I-Q2: IiAkhawunti ze-6
Eli candelo ngaphambili lalineeakhawunti ezi-5; ngoku ziyi-6, ezintathu zazo zingesiNgesi. Sibona iintshukumo ezinomdla, ngakumbi @mappinggis ethatha indawo yokuqala, kwaye iimeko ze @nosolosig ezitsiba ukusuka kwindawo 21 ukuya 15, @gim_intl kunye @Geoactual. Ezi zintathu zazingaphambi kweQ3.
13. @ imephugis 2,668 - 3,760
Njengoko sasithethile, umsebenzi omncinane we @ @bbemapa wenza ukuba uwele kwi-Q3.
I-Q3: IiAkhawunti ze-7
Kweli candelo kusekho iiakhawunti ezisi-7, nangona kukho iintshukumo ezininzi: @NewOnGISCafe kunye @gisandchips zinyuka zisuka kwiQ4 ziye kwiQ3. @comunidadign iwela kwiQ4.
I-Q4: IiAkhawunti ze-13
Olu luhlu alunakuphela, kunye neeakhawunti ezisusela kubalandeli abangama-500 ukuya kwi-1,700. Songeza kuphela iakhawunti yeMephuInteract, kuba besinokudideka kunye neakhawunti yakho ngeSpanish @revistamapping; ezinye ziyafana nezingasentla. Kuzo zonke ezi, inye kuphela ebhalwe ngesiNgesi. Kukho enye kwiCatalan.
26. @comparteig 1,520 - 1,956
34. @cartolab 787 - 927
Sifake i-akhawunti ye-@geoinquiets kuluhlu, kwi-27 isikhundla
Apha ungabona uludwe lwe Top40 kwi-Twitter
Njengengxelo ehlaziyiweyo sishiya i-akhawunti yeGeofumadas, ngokusekelwe kwiifayile zeMlandeliWonk:
Oku kwakungo-Disemba ka-2012, xa sasinabalandeli abangaphezu kwe-100 eMesoamerica kwaye enye eSpain ingaphezulu kwama-400.
Le nto yayingaphambi kokuba sifinyelele kwinombolo yokuqala yabalandeli be-1,000, kwaye enye kuphela e-United States.
Le yimephu ukusukela ngoMeyi 2014. Ngeyona ndawo iphambili eSpain, ezimbini eMelika, enye eMexico nezintathu eMzantsi Merika, kubandakanya enye eBrazil.
Ukusukela nge-Disemba ka-2014, indawo ephezulu yaseSpain sele ihanjisiwe kwiindawo ezimbini ezibomvu, mhlawumbi ngenxa yokwanda kwabafundi beAnglo-Saxon. Ngelixa eMelika, amacandelo aye ahlelwa ngokutsha kwindawo yaseMesoamerican.
Blog Phuma kakuhle Magazines
Post edlulileyo«Ngaphambilini Akunjalo. Ukuhlukana phakathi kweemephu ezindala kunye neemephu zamandulo
Post Next IiNkqubo zoLwazi lweJografi: iividiyo ezingama-30 zemfundoOkulandelayo »
2 Iphendula "Yintoni eyenzekileyo kwi-Top40 Geospatial kwi-Twitter"
Enkosi ngengcebiso. Siyifake kuluhlu. Nangona singakhange sihlaziye igrafu.
Unomdla kwiluhlu lwakho alubonakali njenge-geo account esebenzayo njenge @geoinquiets